ဘလူးတုသ် ငွေပေးချေမှုများသည် နယ်နိမိတ်အသစ်များကို ဖွင့်ပေးပုံ | Martech Zone
စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ညစာစားကြတဲ့အခါ လူတိုင်းနီးပါးက အခြားအက်ပ်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။
Covid-19 သည် ထိတွေ့မှုမဲ့ မှာယူမှုနှင့် ငွေပေးချေမှုများအတွက် လိုအပ်မှုကို တွန်းအားပေးလာသောကြောင့် အက်ပ်အား ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘလူးတုသ်နည်းပညာသည် ရှည်လျားသောအကွာအဝေးတွင် ထိထိမိမိမရှိသော ငွေပေးချေမှုများကို ခွင့်ပြုပေးကာ၊ ရှိပြီးသားအက်ပ်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် အဆိုပါငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ချောမွေ့စေရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ကပ်ရောဂါသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းပညာများကို လက်ခံကျင့်သုံးမှုအား သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်လာပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
US သုံးစွဲသူ4ယောက်တွင် 10 ယောက်သည် COVID-19 ဖြစ်ပွားပြီးကတည်းက ၎င်းတို့၏ အဓိက ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် ထိတွေ့မှုမဲ့ကတ်များ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပြောင်းခဲ့သည်။
သို့သော် QR ကုဒ်များ သို့မဟုတ် အနီးနား ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သော အခြားအဆက်အသွယ်မဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းပညာများတွင် တိုးတက်မှုကို Bluetooth နည်းပညာက မည်သို့တိုင်းတာသနည်း (NFC ကို)?
ရိုးရှင်းသည်- စားသုံးသူ စွမ်းဆောင်မှု။ ကျား၊မ၊ ဝင်ငွေနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးသည် သုံးစွဲသူတစ်ဦး မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းပညာကို အသုံးပြုလိုသည့် ဆန္ဒအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော် လူတိုင်းသည် Bluetooth ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ကွဲပြားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက် အလားအလာရှိသော အလားအလာများကို ပေးဆောင်ပြီး မတူကွဲပြားသော လူဦးရေကို ရောက်ရှိရန် အလားအလာရှိသည်။ ဤသည်မှာ ဘလူးတုသ်သည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပါ၀င်မှုအတွက် နယ်နိမိတ်အသစ်များကို ဖွင့်ပေးပုံဖြစ်သည်။
ထိတွေ့မှုမရှိသော ငွေပေးချေမှုများကို ဒီမိုကရက်ဖြစ်စေရေး
Covid-19 သည် အရောင်းပွိုင့်များတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုနည်းသည် (POS) မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါသည်။ နောက်ပြန်ဆုတ်စရာ မရှိပါဘူး။ မွေးစားအရှိန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းပညာများသည် ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။
အခြေအနေကို ယှဉ်ကြည့်ရအောင် မိုက်ခရိုချစ်ပ်များ ပြတ်တောက်ခြင်း။ ထောက်ပံ့မှုကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကတ်များ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရှေ့မှာ ငွေသားနှင့် တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် လူများ၏ ဘဏ်စာရင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ် ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအရာမဖြစ်ပွားမီ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန် အမှန်တကယ် အရေးတကြီး လိုအပ်ပါသည်။
ထို့နောက်၊ cryptocurrency နှင့်ပင်၊ ထူးဆန်းသော dichotomy တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏တန်ဖိုးကို သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း ဤ crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်များအားလုံးသည် ကတ်များကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်ပေးဆဲဖြစ်သည်။ ဤငွေကြေး၏နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သောကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းမရှိဟု နားမလည်နိုင်ဖြစ်ပုံရသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ပဲလား။ အဆင်မပြေဘူးလား? ဒါမှမဟုတ် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေသလား။
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ကုန်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးချရန် နည်းလမ်းများကို အမြဲရှာဖွေနေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် terminal များကို လက်လှမ်းမမီနိုင်ပေ။ ရှေ့ဆုံးတွင် အပြုသဘောဆောင်သော အတွေ့အကြုံများ ပေးအပ်ရန် အခြားနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
၎င်းသည် ကုန်သည်များနှင့် ဖောက်သည်များအား တန်ဖိုးဖလှယ်ရန် ၎င်းတို့ရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းတွင် ကုန်သည်များနှင့် သုံးစွဲနိုင်မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တို့ကို ပေးသည့် Bluetooth နည်းပညာဖြစ်သည်။ မတူညီသောအက်ပ်များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် QR ကုဒ်ကိုစကင်န်ဖတ်စရာမလိုသောကြောင့် မည်သည့်ထမင်းစားခန်း သို့မဟုတ် လက်လီရောင်းချသည့်အတွေ့အကြုံကိုမဆို လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့်၊ ဤအတွေ့အကြုံများသည် အဆင်ပြေ၊ ပါဝင်နိုင်ပြီး အားလုံးအတွက် လက်လှမ်းမီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဟန်းဆက် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင် နေရာအနှံ့အပြားရှိခြင်း။
ထွန်းသစ်စ စျေးကွက်များနှင့် လူမှုစီးပွားရေး နိမ့်ကျသော အသိုက်အဝန်းများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ရိုးရာဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သမိုင်းကြောင်းအရ သိမ်းဆည်းခံထားရကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ Apple Pay ကဲ့သို့သော NFC နည်းပညာကို စက်အားလုံးတွင် ပံ့ပိုးမပေးထားသောကြောင့် iPhone တစ်လုံးကို လူတိုင်းမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တိုးတက်မှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး တိကျသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် အထက်တန်းလွှာအဆင့်အတွက် အချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။
နေရာအနှံ့တွင်ရှိပုံရသော QR ကုဒ်များသည်ပင် အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာလိုအပ်ပြီး ဟန်းဆက်တိုင်းတွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပေ။ QR ကုဒ်များသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖြေရှင်းချက်မရရှိနိုင်ပါ- သုံးစွဲသူများသည် ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ရန်အတွက် ကုဒ်တစ်ခုနှင့် နီးကပ်နေရပါမည်။ ၎င်းသည် ငွေကိုင်၊ ကုန်သည်နှင့် စားသုံးသူတို့ကြား ကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စာရွက်တစ်ရွက် သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း အရည်အသွေးနိမ့်စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဟန်းဆက်တိုင်းတွင် Bluetooth ကို ဖွင့်ထားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူများသည် ယခင်က လက်လှမ်းမမီသော နည်းပညာကို အသုံးချနိုင်စေရန် Bluetooth ဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်း ရှိလာပါသည်။ ၎င်းသည် ဟာ့ဒ်ဝဲကို လုံး၀ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့် သုံးစွဲသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ညီမျှပြီး ငွေပေးငွေယူတွင် ကုန်သည်၏ POS နှင့် ဖောက်သည်တို့သာ ပါဝင်သည်။
Bluetooth သည် အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေပါသည်။
အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုမိုဖော်ပြကြသည်။ အွန်လိုင်းအတွက် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ကို အသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်တွင်းဝယ်ယူမှုများနှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ 60% ခန့်သည် အမျိုးသမီးများမှ ပြုလုပ်သည်။ ဤနေရာတွင် အဆက်ဖြတ်ခြင်း နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာအသစ်များ၏ စွမ်းအားကို အမျိုးသမီးများ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းတစ်ခု တည်ရှိနေသည်။
ငွေပေးချေမှုနည်းပညာများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် UX ကို အမျိုးသားများက မကြာခဏ ဒီဇိုင်းထုတ်ကြပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် cryptocurrency ကိုကြည့်လျှင် အမျိုးသမီးများကို ချန်ထားခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဘလူးတုသ် ငွေပေးချေမှုများသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူ၊ ပွတ်တိုက်မှုကင်းပြီး ပိုမိုအဆင်ပြေသော ငွေပေးချေမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများအတွက် ပေါင်းစည်းမှုကို ပေးပါသည်။
ထိတွေ့စရာမလိုသော ငွေပေးချေမှုအတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာပလပ်ဖောင်းကို တည်ထောင်သူအနေဖြင့် UX ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အမျိုးသမီးများ အထူးသဖြင့် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များတွင် စိတ်ထဲတွင်ထားရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုနယ်ပယ်ရှိ ကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးအမှုဆောင်များကို ခန့်အပ်ရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။ ဥရောပအမျိုးသမီးငွေပေးချေမှုကွန်ရက်*.
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၊ တည်ထောင်သူအမျိုးသမီးများထံ ပေးခဲ့သော အကျိုးတူအရင်းအနှီးသဘောတူညီချက်များ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် နီးပါးဖြစ်သည်။ နှစ်ဆ. ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံးအက်ပ်အချို့ကို အမျိုးသမီးများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုမန်နေဂျာရာထူးတွင် အမျိုးသမီးများပါရှိသည်။ Bumble၊ Eventbrite နှင့် PepTalkHer ကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါကို စိတ်ထဲမှာထားပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ Bluetooth တော်လှန်ရေးရဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ရှိသင့်တယ်။
Bluetooth ပါသော နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုများသည် ကုန်သည်၏ POS စက်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဂိတ် သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုထံသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Bluetooth ၏ နေရာအနှံ့ သဘာ၀ နှင့် တွဲလျက် Bluetooth မှတဆင့် ငွေလွှဲနိုင်ရန် ရှိပြီးသား မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်လုပ်ငန်း အက်ပ်ကို အသုံးချနိုင်သည်ဟူသည့် အယူအဆသည် လူမှုစီးပွားရေး နောက်ခံ၊ လိင်နှင့် အရောင်းအ၀ယ် အမျိုးမျိုးမှ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသည်။
*ထုတ်ဖော်ချက်- EWPN ဥက္ကဌသည် Bleu တွင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ထိုင်သည်။
Tags: ပန်းသီးပြာသောဘလူးတုသ်bluetooth ငွေပေးချေမှုများချိတ်ဆက်မှုအဆက်အသွယ်မရှိသောငွေပေးချေမှုများကိုဗစ် -19cryptocurrencyဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းပညာများထွန်းသစ်စစျေးကွက်ဥရောပအမျိုးသမီးငွေပေးချေမှုကွန်ရက်ဘဏ္technologyာရေးနည်းပညာfintechမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုမိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်လယ်ပြင်ဆက်သွယ်ရေးအနီးNFCတုပ်ကွေးရောဂါငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ငွေပေးချေမှုအရင်းအမြစ်POSQR Code ကိုuxux ဆုံးဖြတ်ချက်များ